Marina aloha ilay voalazanareo hoe zonay tokoa ny mitroatra rehefa misy ny hadisoana tafahoatra e ! Kanefa anie tsy misy miraharaha an’izany intsony ny eto e ! Rehefa mety amin’ny bizin-dry zareo ny atao dia lazainy fa manara-dalàna fa rehefa manelingelina kosa anefa dia lazainy fa azo enjehina amin’ny lalàna. Izahay asainareo mitroatra io anie izao manahy be mihitsy hoe izahay irery no asainareo manahy nify sy mihetsi-po fa ianareo hitarika fotsiny toy ny mahazatra indray dia iny avy eo no tsy hita e ! Izay ry Jean io mampihazohazo anay io fa aleo aloha izahay hiatrika fetim-pirenena a!